Nagu saabsan - Chengdu Duolin Electric Co., Ltd.
Shirkadda Chengdu Duolin Electric Co., Ltd.
Duolin oo ah astaanta soo -saarka mashiinka kululaynta iyo bixiyaha xalka kuleylinta induction oo la aasaasay 1994. In ka badan 20 sano oo waayo -aragnimo iyo taariikh ah ayaa ku guuleystay kalsoonida sare ee macaamiisha Shiinaha iyo dibaddaba.
Shirkad Farsamada Sare
Awoodda qalabka kululaynta Induction 4-2000KW soo noqnoqoshada shaqada 0.5-400Khz. Cilmi-baarista naqshadeynta iyo horumarinta kooxda Injineerka Duolin, oo si adag u soo saara ISO9001: 2015.Duolin oo ah shirkad tiknoolajiyad sare leh, ansixisay in ka badan 20 patent qaran, Bixi tamar cagaaran oo la isku halleyn karo ee shirkadaha wax -soo -saarka iyo farsamaynta.
Laga soo bilaabo 2007, waxaan samaynaynay ganacsi shisheeye waxaanna wakiillo ku leenahay Brazil, Germany, Argentina, UK, Iran, Russia, India, Pakistan iyo South Africa. Isticmaalka ugu dambeeya ee Giriigga, Canada Vietnam, Indonesia ... Qaar ka mid ah isticmaalayaasha dhammaadka ah ee nala shaqaynayay tan iyo 2009.
Nidaamka kuleylinta induction -ka ayaa si ballaaran loogu adeegsaday baalalka biraha kaarboon kaarboon kaarboon kuleyl leh, sahayda korontada ee mashiinka giraangirta usha giraanta makiinada iyo adkaanta, adkeynta soo -gelinta bar -dheer , cooper aluminium ....
1. In ka badan 20 sano oo waayo -aragnimo ah warshadaha kuleylinta induction
2. Imtixaan bilaash ah oo lagu dooranayo qaabka mashiinka ka hor intaadan iibsan
3. Cilmi -baarista naqshadeynta badeecaddu waxay horumarisaa oo dayactirtaa kooxda Injineerka Duolin, adeegga nolosha mashiinka
4. Tijaabi mashiinka sida shuruudaha kuleylka macaamiisha iyo gabowga wax ka badan 6 saacadood si loo dammaanad qaado tayada wanaagsan
5. Sii buugga rakibaadda iyo hagaha dhibka
6. Adeegso qaybaha sumadda caanka ah Infineon Omron Schneider si aad u hubiso tayada agabka
Hal -abuurnimada marka hore iyo macaamilka ugu sarreeya - Si isdaba joog ah u raadi inaad raadiso kaamil
Dhammaan badeecadaha Duolin si madax -bannaan ayaa loo horumariyey lahaanshaha lahaanshaha hantida, in ka badan 60 nooc oo alaab ah ayaa la soo saaray 13 sano iyada oo loo marayo cilmi -baaris taas oo la helay laba shatiyada qaranka iyo sannadka cusub ee teknolojiyadda teknolojiyadda iyo u -qalmitaanka shirkadaha farsamada sare ee mashaariicda warshadaha muhiimka ah ee Chengdu.
Sida aan ognahay, biraha waxaa loo samayn karaa qaab kasta ka dib kuleylinta. Waqtiyadii hore, gaaska, dhuxusha iyo alwaaxyada ayaa loo gubay si ay u bixiyaan kuleyl, ka dib markii lagu wareejiyay birta, farsamada been abuurka ah ee aaladda birta qabow ayaa asal ahaan ka soo baxda. Xataa maalmahan, waxaa jira dad danaynaya in madbacadda guriga lagu tababaro sida hiwaayadooda.
Halkii gaas iyo kuleylinta dhuxusha, si dhaqso leh cagaar cusub iyo habka keydinta tamarta loo keydiyo. Tiknoolajiyadda kululaynta wax -ku -oolka ah ayaa timid Shiinaha 1956 -kii, oo laga keenay Midowgii Soofiyeeti, waxaana loo adeegsaday warshadaha baabuurta inta badan. Duolin waxaa la aasaasay 1994, oo uu magacaabay Aasaasaha Mr Zengxiaolin iyo xaaskiisa, Mr Zeng wuxuu baaray markii ugu horreysay IGBT dowladaha adag ee mashiinka kuleylinta iyo Mrs Zeng iibka, shirkadda sida ilmahooda, ka dibna ku koray in ka badan 200 oo shaqaale kooxeed, xarumo iib ah in ka badan toban gobol oo ku yaal Shiinaha. 2007, xarun iibka caalamiga ah ayaa la aasaasay, Duolin wuxuu furay suuqa shisheeye.
Alaab kasta oo ay sameeyeen kooxda Injineerka Duolin, waxaan siin doonaa aqoonsi, tirada taxanaha koronto -dhaliyaha kuleyliyaha, waa kaliya oo gaar ah, oo la duubay qeyba kasta oo la adeegsaday, markii mashiinku jabay, noo soo dir lambarka aqoonsiga, wuxuu heli doonaa dhammaan macluumaadka la xiriira mashiinka banaanka, bixi qaybaha dayactirka saxda ah ama soo bandhig xalka farsameynta gariiradda induction. Mid ka mid ah foornada kululaynta induction waxaa loo isticmaali karaa foorno kulul, adkaynta induction, daboolinta induction, alxanka induction & alxanka alxanka marka lagu xiro qaabab kala duwan. si loo bakhtiiyo induction.
Duolin, oo ah astaanta Shiinaha ee nidaamka kuleylinta induction, wuxuu soo saaray in ka badan 30,000 mashiinno go'an wuxuuna taageeraa xalka kuleylinta kuleylinta macaamilka, khadka wax -soo -saarka kuleylka kuleylka ee loo habeeyay sidoo kale, ka caawi macaamilkayaga faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda kuleylinta cusub, hagaajinta deegaankooda shaqada, si otomaatig ah u bixi khadka wax -soo -saarka si loo badbaadiyo foosha loona kordhiyo wax -soo -saarka kululaynta.